Tani waa qeyb ka mid ah waxa ina sugaya sanadka 2021 | Waxaan ka socdaa mac
Tani waa qayb ka mid ah waxa ina sugaya 2021
Sannad cusub ayaa bilaabmaya. Waxaan uga tagnay sanad 2020 qaar (inbadan) nacalad ah oo sanadka kala guurka wuxuu bilaabmayaa wixii nolosheena ahaan jirtay kahor coronavirus. Heerka ganacsiga, Apple si xun uma sameynin sanadka 2020, laakiin waxaa lafilayaa in sanadka 2021, ay wax waliba sifiican usocdaan wax walboo lafilayo sida ay sheegayaan wararka xanta ah. Aan aragno waxa na sugaya 2021.
1 Maxaa na sugaya 2021 aaladaha
1.1 Apple TV cusub oo wata Remote cusub
2 Macs cusub oo leh M1
2.1 Shaashadaha Mini Led ee qalabka ayaa nagu sugaya 2021
Maxaa na sugaya 2021 aaladaha
Sannadkii hore waxaa jiray xan badan oo ku saabsan aaladaha aan arki doonno 2021-ka iyo in Apple si uun loo maquunin doono, maxaa yeelay in badan oo iyaga ka mid ah ayaa la filayay sannadka 2020. Maaha cilmi sax ah mana ogin inay rumoobi doonaan iyo in kale, laakiin imaanshahooda ayaa la filayaa sida biyaha May.
Apple TV cusub oo wata Remote cusub
Mid ka mid ah filashooyinka ugu sarreeya ayaa noqon doona Cusbooneysiinta Apple TV. Ugu danbeyn. Waxaa la filayaa in sanadkaan 2021, encoder-ka la cusbooneysiin doono gudaha iyo dibaddaba. Isla sidaas oo kale ayaa la filayaa in la sameeyo leh buro xakamaynta, taasi waa laga cusbooneysiiyay dhammaan wixii sharraxaad iyo shaqeyn ahaan ah. Wuxuu ahaan lahaa Apple TV oo wata processor-kiisa cusub iyo U1 Chip.
Waa run inaan sugeynay oo xamanayay suurta galnimada mudo dheer mana immin uun. Tani waxaa loo maleynayaa inay na sugeyso 2021, laakiin wali waa xanta aan cadeyn.
Macs cusub oo leh M1
Tani waa mid ka mid ah kutiri-kuteenta ay qof waliba filayaan. Markii la soo saaray Macs-kii ugu horreeyay ee leh M2020 chip iyo Apple Silicon sanadka 1, waa iska caadi in dadka isticmaala ay sugaan 2021 dhammaan noocyada 'Mac' waa la cusbooneysiiyay gebi ahaanba iyo moodello badan ayaa lagu sii daayaa processor-radan cusub.
Waxaa la filayaa moodooyinka cusub ee MacBook Pro, iMac iyo Mac Pro. Shaki nagagama jiro imaatinka 16-inch MacBook Pro iyo iMac oo ay la socdaan processor-radan. Xaqiiqdii Apple horay ayey uga shaqeyneysay waxaana laga yaabaa inaan ku helno wax cusub arrintaan bisha Maarso. Waa inaan sugnaa si aan u aragno waxa ku dhacaya Mac Pro.
Xitaa waxaa jira warar xan ah xitaa haddii aan aragno Macs cusub sanadka 2021, isbedelka naqshadeynta ma imaan doono illaa 2022.
Intaa waxaa dheer, baahida loo qabo Mac-yada ayaa sii kori doonta. Sida laga soo xigtay Nikkei Apple waxay damacsan tahay inay horey u soo saartay 2,5 malaayiin MacBooks oo leh qalabka ARM ee cusub Febraayo 2021. Warbixintan Waxaa sidoo kale lagu sharaxay in processor-yada kori doona MacBook-yada cusub ay soo saari doonaan TSMC adoo adeegsanaya shan wax soo saar nanometer.
Shaashadaha Mini Led ee qalabka ayaa nagu sugaya 2021
Mid ka mid ah wararka xanta ah ee sida weyn u faafay 2020 ayaa ahaa imaatinka Tiknoolajiyada Mini Led qalabka Apple kala duwan. Waxaan ku haysan lahayn shaashadaha iPhone-ka, iPad-ka iyo Mac.Hase yeeshee, ma aysan imaan. Marka isticmaaleyaashu waxay si aad ah u rajeynayaan taas teknolojiyadda ayaa si buuxda loo hirgelin doonaa sanadka 2021.
Tani waa uguyaraan waxa falanqeeyayaashu ka hadlayaan. Haa, Waa inaan sugnaa ilaa bartamaha sanadka si loo dhameystiro aalado kala duwan. Sida laga soo xigtay xanta, waxaan ka hadli lahayn waqtiyada kama dambaysta ah:
12,9-inch iPad Pro: Qeybtii koowaad ee 2021.
16-inch MacBook Pro: Qeybtii labaad ee 2021.
Nuevo 27-inji iMac: Qeybtii labaad ee 2021.
AirTagskii caanka ahaa waa in la soo bandhigaa sanadka 2021 tan iyo sanadkii hore ugu danbeyntii ma arkin iftiinka iyo inay filayeen dhamaan falanqeeyayaasha. Qalabkan laga hadlayo wuxuu abuuray rajo badan, mana ahan wax badan wuxuu qaban karo, laakiin waa sida muranku u yahay. Waxay ku dhalan doontaa fikradda ah inay noqoto nuqul ka mid ah Tiles-yada, in kasta oo ay run tahay in Apple mar walba lagu eedeeyo khayaano iyo kuwa kale.
Waxaan la kulannaa wax lala yaabo. New AirPods ayaa na sugaya 2021. Iyagu ma noqon doonaan Studio-ka AirPods sida falanqeeyeyaasha qaarkood ku xantaan, laakiin waxay noqon doonaan isbeddelka cusub ee AirPods ee la bilaabay dhowr sano ka hor oo kacaan ka dhigay suuqa.
Dhageysiyadan cusub ee wireless-ka waxay u imaan doonaan isla tiknoolajiyad sida AirPods Pro. Tikniyoolajiyadda SiP, taas oo u oggolaanaysa tiro aad u tiro badan oo ka mid ah waxyaalaha in lagu ururiyo hal meel isla markaana ay sidaas u suurto gasho in sida ugu badan looga helo isla goobtaas. Waxaan haysan doonaa iyaga bartamaha 2021 sida ay qabaan falanqeeyayaasha.
Kuwani waa xanta ku saabsan aaladaha ay u badan tahay inay run noqdaan sanadkan 2021. Xaqiiqdii inbadan oo kale ayaa soo bixi doonta halkanna waan kusii wadi doonaa inaan kugula socodsiino taas.
Waxaan fursaddan uga faa'iideysanayaa a faraxsan 2021 iyo inaan bilowno inaan ku raaxeysano wax yar.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Xanta » Tani waa qayb ka mid ah waxa ina sugaya 2021
Dareenka ugu horreeya ee gacanka WaterField